I-Koi quartz yintlanzi enqabileyo. Ubomvu kunye neorenji zii-hematite inclusions. Umbala womxholo wesinyithi okhutshiwe. IHematite kunye ne-quartz ziqhelekileyo zifunyanwa ngokwahlukeneyo, kodwa kunqabile ukuba kunye.
I-Koi quartz yintlabathi enzima, yamaminerali e-crystalline eyenziwe nge-silicon kunye nee-atom ze-oksijini. Iiatom zidityaniswe kwisakhelo esiqhubekayo seSiO4 i-silicon oxygen tetrahedra, kunye neoksijini nganye ekwabelwana ngayo phakathi kwe-tetrahedra emibini, inika ifomula yemichiza ngokubanzi ye-SiO2. I-Quartz sesesibini esona mineral sininzi kwi-Earth crust crust, ngasemva kwe-feldspar.